musha nyika dzakabatana Hollywood nyeredzi Leonardo DiCaprio Yenyaya Yomwana Wekuwedzera Plus Untold Biography Facts
CB inopa Nhoroondo Yakazara yeActor mutevedzeri anozivikanwa nezita rezita rezita "Lenny D". Yedu Leonardo DiCaprio Childhood Nhau pamwe neS Untold Biography Chokwadi inounza kwauri nhoroondo yakazara yeakajeka zviitiko kubva paudiki hwake nguva kusvika zvino.
Hongu, munhu wese anoziva nezvekutaridzika kwake kwakanaka uye nehunyanzvi hwekuita hunyanzvi. Nekudaro, vashoma chete ndivo vanofunga Leonardo DiCaprio's biography iyo inonakidza kwazvo. Zvino, pasina imwezve ado, ngatitangei.
Leonardo DiCaprio Childhood Nhau - Hupenyu hwepakutanga uye Nhoroondo Yemhuri:
Leonardo Wilhelm DiCaprio akazvarwa musi we 11th waNovember 1974 kuLos Angeles muCalifornia, United States.
Aiva chete vakaberekwa mubatanidzwa pakati mai vake, Irmelin DiCaprio (vashandi panguva Uffizi Gallery muFlorence) uye baba, George Dicaprio (a enyambo bhuku Artist uye Distributor) mwana.
Leonardo uyo ane Italian / chiGerman Paternal midzi, pamwe neRussia yemadzimai midzi, anga asiri mutorwa kune hunyanzvi asati aberekwa. Akatanga kuratidza kuionga kwake amai vake pavakamunzwa achikava mukati mechibereko chake paakatarisa mumwe wemifananidzo yaLeonardo Da Vinci muItari.
"Baba vangu, vari iye murume anotora mameseji ezvematongerwo enyika, vakati 'zita rake rinofanira kuve Leonardo"
DiCaprio akaburitsa zita rake rekutanga.
Mudiki Leonardo akakurira pamwe naamai vake munzvimbo dzakasiyana dzeLos Angeles, zvichitevera kurambana kwevabereki vake achiri mudiki.
Iye, zvakadaro, akachengetedza ukama hwepedyo nevabereki vose ivo vakazvipira mukana wavo mukurera kwake uye vakatsigira basa rake kuvaka mukuita.
Leonardo DiCaprio Dzidzo uye Basa Rekuvaka:
Kukura muLos Angeles, Leonardo aifarira kuita majee nevabereki vake pamwe nekuteedzera vanhu vakasiyana.
Aya maitiro akasimba uye ekugadzira aive anoratidza hunhu hwake mukati memazuva ake echikoro paSeeds Elementary School (yava kunzi UCLA Lab Chikoro).
Achigutsikana, akawana basa rake rokutanga pamushumo weterevhizheni, vana Romper Room paakanga akwegura 5 asi akaregwa kubva pachigadziro nekuda kwekuvhiringidza kwake.
Yakanga ichingova nyaya yemakore pamberi peLeonardo, pazera re14, akadzoka paTerevhizheni kuti atange basa rake rekuita. Akaita kutaridzika mune zvekushambadzira neTV nhepfenyuro yeiyo 'Iyo New Lassie' yaive imwe pakati pevakawanda.
Makore ekuyaruka aLeonardo akamuona achifambira mberi kuenda kuLos Angeles Center yeEnriched Study kwaakadzidza kwemakore mana asati anyoresa pachikoro cheJohn Marshall High.
Leonardo DiCaprio Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Yaiva paJohan Marshall High chikoro icho Leonardo akadzidza kwemakore matatu asati apera. Nokudaro, akazopedzisira asangana chete neGeneral equivalency diploma (GED).
Leonardo aizozoona sarudzo yake yekusiya basa seyakakosha paakanyora kubudirira kwake kwekutanga mumitambo yeterevhizheni Parenthood.
Pamberi pekubudirira, aingova hunhu mune 'vekunze' (akateedzana) pamwe nesipo opera 'Santa Barbara'.
Leonardo DiCaprio Biography - Simuka Mukurumbira:
Basa raLeonardo harina kuenda kwese asi kumusoro nekuonekwa kwakazotevera mumhanzi yemhuri 'Kukura Kwemarwadzo' mushure meizvozvo akaita dhiri rake mune rinotyisa bhaisikopo 'Critters 3'.
Muna 1993, kuvaka kwaLeonardo mukurumbira wepasirese kwakaungana pamwe ne'Uyu Mukomana Hupenyu 'pakati pemamwe mafirimu gore iro pamwe nekuonekwa kwake kushoma muna 1995 na1996.
Mukurumbira akazouya achifona muna 1997 apo Leonardo akaisa nyeredzi muJames Cameron's Titanic (1997) saJack Dawson ane makore makumi maviri, murume weWisconsin asina mari anokunda matikiti maviri echitatu-kirasi pane yakashata RMS Titanic.
Iyo bhaisikopo iyo yakaratidza kugona kwaLeonardo kubata mabasa anotungamira muHollywood, yakayambuka bhajeti yemamiriyoni mazana maviri emadhora kuti ive imwe yemafirimu anodhura uye akabudirira. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Leonardo DiCaprio Hukama Hwakapfuura:
Icho chisingatenderwi chokwadi kuti chimwe chezviratidzo zvevatambi vanobudirira muHollywood ndezere rurefu rwekufambidzana kwenhau. Zvisinei, urongwa hunoita sokuti haruzoperi chero nguva pfupi kuna Leonardo uyo ane makore makumi maviri apfuura, akaitwa mhando dzisingasviki nemakore e25.
Zvinoshamisa pakati pevakadzi (avo vanopfuura 22 muchiverengero) vanosanganisira musikana wake wekutanga wepachena Bridget Hall (1994), gurukota reBrazil Gisele Bundchen (2000-2005), uye Sports Illustrated model Bar Refaeli (2005-2011).
Vamwe vanosanganisira musikana wake wekutanga brunette Lorena Rae (2017), musikana wake achangoburwa uyo ari weNew Zealand mudiki, Juliette Perkins (Gumiguru 2007) pamwe nemusikana wake wazvino wemakore makumi maviri nerimwe wekuArgentina musikana Camilla Morrone.
Leonardo DiCaprio Hupenyu Hwemhuri:
Leonardo ndiye oga mwana akaberekerwa kubatana pakati paamai vake Irmelin DiCaprio uye baba George Dicaprio. Isu tinokuudza mashoko echokwadi nezvehupenyu hwake hwehukama.
Nezve Leonardo DiCaprio Baba:
Leonardo baba, George Dicaprio mupepeti, munyori, mutambi wevashandi pamwe chete nekuparadzira komiki.
Aive George akasimudzira pfungwa yaLeonard yekugadzira nekumutora kuti aone mabhaisikopo pamwe nekumukurudzira kuti ave akanakisa - zvaakamborangarira nenzira inotevera:
"Pandakanga ndiine makore gumi nemana, mushure mekuita kushambadzira kwakawanda kweterevhizheni, kusanganisira mota dzeMatchbox neBubble Yum, ndaive ndichiona firimu raRobert De Niro nababa vangu, pavakanongedzera kuchiratidziro ndokuti kwandiri," Mwanakomana, tarisa zvakanyanya nekuti ndizvo zvinoita sekuita kukuru. ”
Makore mashoma gare gare ndakazviwana ndiri padanho rine mutsindo ndichitamba ndakatarisana naRobert De Niro [muHupenyu hweMukomana uyu], ndichimutarisa uye ndichidzidza kubva kwaari ”.
George, hafu yechiGerman nehafu chiItaly, akasangana ndokudanana naamai vaLeonard vachiri mudzidzi wepakoreji. Hukama hwavo hahuna kushanda kunze nekudaro, kupatsanurwa apo Leonardo aingova negore rimwe chete.
Leonardo DiCaprio Amai:
Amai vaLeonard, Irmelin Indenbirken aishanda kuUffizi gallery muFlorence panguva yaakabereka Leonardo mudumbu rake. Irmelin aive nehukama hwepedyo nemwanakomana wake waaishanda asinganeti kupa.
Kushingairira kwaIrmelin kuchengetedza kufarira kwaLeonardo kwakamuona achiva amai vanodzivirira vanodzivirira paparazzi isingakoshi kubva kune anozivikanwa Actor. Leonardo anomudanawo kuti mamarazzi nekuda kwepenchant yake yekutora mifananidzo yake ari ega.
Leonardo DiCaprio Hama:
Leonardo ane mukoma-mukoma anonzi Adam Farrar. Adam akaberekwa naGeorge Decaprior naPeggy Farrar - mukadzi waakaroora mushure mekuparadzana kwake naIrmelin.
Adhamu, saLoberto, akatanga kuita basa asi akarasikirwa nechinangwa paakabatwa mumishonga yekushandisa zvinodhaka. Nemhaka yeizvi, akanga ane vashoma-run-ins pamwe nemutemo uye akarasikirwa nekutaura na Leonardo uyo akazvikomberedza nemushumo wakanaka.
"Ini ndakasungwa kashanu kana katanhatu nekuda kwebavha diki, kuba muzvitoro, ndichiedza kutsigira opiate kupindwa muropa kwehafu yegiramu kune gramu pazuva".
“Ini naLeo hatina kumboita nharo. Asi akatanga kukomberedza nevanhu vaisada ini padhuze. Ndiye nyeredzi huru pasi rese uye ariko ini, ndakavhiringidzwa nemishonga. Ndakavharwa zvishoma nezvishoma kubva munyika yake. ”
Leonardo DiCaprio Akakuvadzwa Chiso:
Leonardo maitiro akanaka akanga ava kuda kuparadzwa mu2005 apo mukadzi, Aretha Wilson akaputira chiso chake negirazi yakaputsika munguva yeHollywood party.
Aretha uyo ari wekare-muenzaniso anoti anotanga kurwisa nokuti Leonardo aitaridza sekare-mukomana waive achitaura zvinhu zvisingaverengeki pamusoro pake.
Iye, zvakadaro, akapinda mukumbiro akashandura mu2010 akaona makore 7 akaiswa mutorongo ayo aifanirwa kushumira akaderera kusvika makore maviri.
Nhamba yeAretha uyo akaiswa mujeri mu2014, Leonardo haana kumbotaura pamusoro pake, uye haana kumanikidzira mhosva, ruzivo runoratidza kuti haatongotyi pamusoro pake uye kubva ipapo akafamba.
Leonardo DiCaprio Chokwadi cheMunhu:
Leonardo mukurumbira ane zvinangwa zvinangwa asingafarire chete kunakidzwa nemubairo wekushanda nesimba asi anobatsira kuisa kunyemwerera kumeso kwevanotambura. Kunyanya zvakadaro, iye munyoro wemwoyo uye anoregerera.
Kunyangwe iye ari agnostic, Leonardo anoona nharaunda sehupenyu hutsvene hunoda kuchengetedza kuzara kwerunako rwayo rwekutanga. Maererano naye:
"Mhepo yakachena, mvura, uye nzvimbo inogadzikana ndeyokodzero dzevanhu dzisingakwanisi. Uye kugadzirisa dambudziko iri haisi mubvunzo wezvematongerwo enyika, ndeye mubvunzo wekupona kwedu. "
Leonardo haangori nezve mafirimu sezvo iye ane mari mune akati wandei tech-based uye Agro makambani. Zvinosanganisira Virtual chaiyo yekutanga -Mindmaze, marara ekutanga - Rubicon Global, data analytics kambani - Qloo, mattress inogadzira - Casper, uye inochengetedza chikafu kambani - LoveTheWild, pakati pezvimwe zviwanikwa. Sei bhizinesi savvy anogona kuita Hollywood Wemukurumbira?.
Leonardo DiCaprio Unyanzvi:
Leonardo nekufamba kwenguva aratidza kuti moyo wake wakapfuma sekutarisa kwake kuburikidza nemabasa erudo anoonekwa mukupa kwake kwe $ 35,000 yekuvaka "Leonardo Dicaprio Computer Center kubazi reLos Feliz reLos Angeles Public Library.
Uye zvakare, akatora danho nekukurumidza mushure mekudengenyeka kwenyika kuHaiti muna 2010 nekupa madhora miriyoni imwe pabasa rekuyamura, chiratidzo chaakadzokorora mumashure meHurricane Harvey muna1.
Kuwedzera pane zvaaiita zvekubatsira vanhu aive achishanda nevana makumi maviri nenherera kubva kuSOS Children's Village kuMaputo, Mozambique, panguva yekutora ropa reDiamond Diamond.
Leonardo akanzi akabatwa zvakanyanya nekudyidzana kwake nevana uye akafunga kuona kurera kwemusikana mudiki waaive nehukama hwepedyo naye.
Leonardo DiCaprio Chokwadi:
Bvudzi raLeonardo DiCaprio muTitanic raive rakakurumbira pakati pevechidiki veAfghan zvekuti rakarambidzwa neTaliban.
Leonardo DiCaprio akatenga chitsuwa muBelize 10 makore akapfuura uye akavaka nzvimbo yekutanga yezvekudzorera eco-restorative resort iyo inodzorera mvura iri pachitsuwa ichi, pane gungwa, uye sango.
Leonardo DiCaprio haasati amboita zvinodhaka uye aifanirwa kudzidziswa kutamba nekukwirira nevanyanzvi vezvinodhaka.
CHOKWADI KUTI: Thanks for reading vedu Leonardo DiCaprio Childhood Story pamwe chete biography nhoroondo. At ChildhoodBiography, isu tinoedza kururamisa uye kururamisa. Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisingatarise zvakanaka muchinyorwa chino, ndokumbira utaure kana taura nesu!